Waakee ciyaaryahanka ku sugan kooxda Juventus uu si xoogan u doonayo Pep Guardiola inuu shaqaaleysiiyo? – Gool FM
(Manchester) 03 Luulyo 2019. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xiriir la sameeyay daafaca cabqariga ah ee reer Talyaani iyo kooxda Juventus Leonardo Bonucci, si uu ugu qanciyo inuu u soo dhaqaaqo horyaalka Premier League inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday maanta oo arbaco ah in Leonardo Bonucci ay suurtogal tahay inuu ka dhaqaaqo kooxda Juventus inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in macalinka reer Spain uu kala hadlay Leonardo Bonucci oo haatan da’adiisu tahay 32 jir inuu ku soo biiro kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Skay Blues suuqan xagaaga.
Guardiola ayaa qorsheenaya inuu lasoo saxiixdo Leonardo Bonucci si uu ugu noqdo badalka Vincent Kompany oo dhamaadka xili ciyaareedkii tahay ka dhaqaaqay Etihad Stadium, kaasoo loo tixgeliyo inuu ahaa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee kooxda.
Warbixintan ayaa lagu xusay in Leonardo Bonucci uu ka codsaday tababare Pep Guardiola inuu helo waqti ku filan si uu kaga fiirsado doorashada uu sameenayo, gaar ahaan maadaama ay isaga iyo qoyskiisa ku faraxsan yihiin tan iyo markii ay dib ugu soo laabteen magaalada Turin.